USB စကားဝှက်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 12/01/2022 20:00 | လည်ပတ်မှုစနစ်များ, Windows ကို
USB မှတ်ဉာဏ်များသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသော အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် သိမ်မွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ယူဆောင်သွားလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့ကို ဆုံးရှုံးသွားသော သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့မေ့သွားသည့်နေရာများတွင် သိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ပြဿနာဖြစ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း သင်၏အကြောင်းအရာသည် ထိလွယ်ရှလွယ်၊ လျှို့ဝှက်ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ထားနိုင်သည်ဆိုပါက ဖြစ်နိုင်သည်။ အဲဒါကြောင့် အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ စကားဝှက်က USB ကိုကာကွယ်ပြီး သင့်အကြောင်းအရာကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။.
တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ flash drive များကို အကာအကွယ်မရှိသော flash drive များထဲမှ တစ်ခုကို တွေ့ရှိပါက သာယာပြီး အလျှော့ပေးသည့် အခြေအနေပင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စပ်စုသောမျက်လုံးများဖြင့် ၎င်း၏အကြောင်းအရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမှ မည်သည့်အရာမှ တားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ- ဓာတ်ပုံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ... တွေ့ရှိသူသည် ၎င်းကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် တစ်ခုတည်းသော အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့တွင် အချက်အလက်အားလုံးကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ USB နှင့် ၎င်း၏ အကြောင်းအရာများကို ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ ဤပို့စ်တွင် လက်တွေ့အကျဆုံး နည်းလမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်မည်မှာ သေချာပါသည်။
1 BitLocker: Microsoft ၏ဖြေရှင်းချက်
2 Rohos Mini Drive- ကုဒ်ဝှက်ထားသော အပိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။
3 SecurStick- USB အတွင်း ဘေးကင်းသောဇုန်
4 WinRAR ဖြင့် USB စကားဝှက်ကို ကာကွယ်ပါ။
5 USB အကာအကွယ်
6 VeraCrypt သညျ
7 Linux အတွက်သာ- Cryptosetup
BitLocker: Microsoft ၏ဖြေရှင်းချက်
BitLocker ဖြင့် USB စကားဝှက်ကိုကာကွယ်ပါ။
Windows 10 (အပြင် Windows ကို 11) ကိုအသုံးပြု၍ drive encryption ၏ရွေးချယ်ခွင့်ကိုပေးသည်။ bitlockerပျောက်ဆုံးသွားသော သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရသော ကွန်ပျူတာများနှင့် မမ်မိုရီယူနစ်များမှ ဒေတာခိုးယူခံရခြင်း သို့မဟုတ် ထိတွေ့ခြင်းမှ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးသည့် လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု။
BitLocker သည် အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် သို့မဟုတ် ပင်နံပါတ်ကို မပေးမချင်း USB သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ဆို့ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးထားသည်။ ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ USB ထည့်ပါ။ သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာတွင် ဘောပင်ဒရိုက်။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။ "Bitlocker ကိုဖွင့်ပါ။"
ပြီးမှ လုပ်ရမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုရွေးချယ်ပါ။. USB ကို ဝင်သုံးချင်တိုင်း ထည့်ရမယ့် အရာဖြစ်လို့ အဲဒါကို ကောင်းကောင်းစဉ်းစားရမယ်။ (ရွေးချယ်နိုင်သော စကားဝှက်မိတ္တူကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Microsoft အကောင့်တွင်၊ ဖိုင်တစ်ခု သို့မဟုတ် hotmail တွင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
အပြီးသတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ။ "စာဝှက်ရန်"လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးနောက် အကြောင်းအရာကို အကာအကွယ်ပေးပါမည်။
Rohos Mini Drive- ကုဒ်ဝှက်ထားသော အပိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။
USB ကို စကားဝှက်ကာကွယ်ရန်- Rohos
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကို ကုဒ်ဝှက်ရန်နှင့် စကားဝှက်ကို ကာကွယ်ရန် ကိရိယာများစွာ ရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း အများစုမှာ ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်များ လိုအပ်ပါသည်။ အဲဒါကြောင့် ရွေးချယ်မှု လိုမျိုးပေါ့။ Rohos Mini Driveပစ်မှတ်ကွန်ပြူတာတွင် စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများ ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်ပေးသော၊
အခမဲ့ထုတ်ဝေမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ USB flash drive တွင် 8GB အထိ ဝှက်ထားသော၊ ကုဒ်ဝှက်ထားသောနှင့် စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော အပိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ကိရိယာသည် AES သော့အရှည် 256 bits ဖြင့် အလိုအလျောက် စာဝှက်စနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသတွင်းစနစ်တွင် ကုဒ်ဝှက်ရေးဒရိုက်ဗာများကို မလိုအပ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကာကွယ်ထားသောဒေတာကို ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Rohos Mini Drive ပင်မစခရင်တွင် "Encrypt USB Drive" ကို ဦးစွာနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယူနစ်ကို ရွေးချယ်သည်။
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် စကားဝှက်အသစ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပဒစ်တွင် ကုဒ်ဝှက်ပြီး စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော ဒစ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးမည့် "Create disk" ကိုနှိပ်ပါ။
ကာကွယ်ထားသောဒစ်ကိုဖွင့်ရန် USB stick ၏ root folder ရှိ Rohos Mini.exe အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။ စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်၊ Rohos disk ကို သီးခြား drive တစ်ခုအနေဖြင့် တင်မည်ဖြစ်ပြီး File Explorer မှတဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။.
Rohos အခန်းကန့်ကိုပိတ်ရန်၊ Windows Taskbar ၏အကြောင်းကြားချက်ဧရိယာရှိ Rohos အိုင်ကွန်ကို right-click နှိပ်ပြီး "Disconnect" option ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်: Windows သို့မဟုတ် Mac အတွက် Rohos Mini Drive (အခမဲ့)
SecurStick- USB အတွင်း ဘေးကင်းသောဇုန်
လက်တွေ့ကျသောဖြေရှင်းချက်- SecurStick မှ Safe Zone
ဤသည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ SecurStick တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် Windows၊ Linux နှင့် Mac တို့တွင် ပြဿနာမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း ၎င်းကို configure လုပ်ရန်အတွက် သင်ကုဒ်ဝှက်လိုသော USB မှ EXE ဖိုင်ကို run ရပါမည်။
SecurStick ၏ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာ USB တစ်ခုအတွင်း ကုဒ်ဝှက်ထားသောအပိုင်း (Safe Zone) ကို ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ဖန်တီးနိုင်စေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုရန်၊ သင်လုပ်ရန်မှာ ၎င်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ဇစ်ဖွင့်ပြီး ၎င်းကို သင်၏ USB stick တွင် ကူးယူရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည်အပလီကေးရှင်းကိုလည်ပတ်ပြီး၎င်း၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်သာလိုအပ်သည်။ EXE ဖိုင်ကို run ခြင်းသည် command prompt နှင့် browser window ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ ဤအချက်တွင် သင်သည် စကားဝှက်တစ်ခုဖြည့်သွင်းပြီး ထည့်သွင်းရန် Create ကိုနှိပ်ရပါမည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံဇုန်.
ဤနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် SecurStick EXE ဖိုင်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ဖွင့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လော့ဂ်အင်ဝင်းဒိုးတစ်ခုဖြင့် တင်ပြပါမည်။ သင်ဝင်ရောက်သောအခါ၊ လုံခြုံသောဇုန်ကိုဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကူးယူထားသော ဖိုင်များအားလုံးသည် အလိုအလျောက် ကုဒ်ဝှက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါင်းလုပ်: Windows၊ Linux သို့မဟုတ် Mac အတွက် SecurStick (အခမဲ့)
WinRAR ဖြင့် USB စကားဝှက်ကို ကာကွယ်ပါ။
ဒါလည်းမှန်တယ်။ WinRAR ကျွန်ုပ်တို့၏ USB မှတ်ဉာဏ်များတွင် ဒေတာများကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ USB မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုလုံးကို အကာအရံမဲ့မည့်အစား ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာသည် သီးခြားဖိုင်များ သို့မဟုတ် ဖိုင်တွဲများ၏ ကုဒ်ဝှက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဤရွေးချယ်မှုသည် အထူးသဖြင့် အသုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် အောက်ပါအချက်များ
စတင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာဝှက်လိုသော ဖိုင်တွဲပေါ်တွင် ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်စရာ «မှတ်တမ်းသို့ ထည့်ပါ ».
အောက်တွင်ဖွင့်ထားသောဝင်းဒိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့တက်ဘ်သို့သွားပါ။ "အထွေထွေ"၊ မော်ကွန်းပုံစံအဖြစ် RAR ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ "စကားဝှက်သတ်မှတ်ပါ" ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် checkbox ကိုရွေးချယ်ပါ။ "ဖိုင်အမည်များကို စာဝှက်ရန်" နှင့် validate "လက်ခံရန်".
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ယခင်သတ်မှတ်ထားသော စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သာ ဖွင့်နိုင်သော .rar ဖိုင်ကို ဖန်တီးမည်ဖြစ်သည်။
နည်းလမ်းသည် အခြားသော အလားတူ ပရိုဂရမ်များအတွက်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါတို့သည်လည်းအောင်မြင်ရန်အတူတူပင် 7-Zip: ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ဤပရိုဂရမ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ USB drive ရှိ ဖိုင် သို့မဟုတ် ဖိုင်တွဲပေါ်တွင် right-click နှိပ်ပြီး “Add to file” option ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ပွင့်လာသောဝင်းဒိုးအသစ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖိုင်ဖော်မတ်ကိုရွေးချယ်ပြီး စကားဝှက်တစ်ခုထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ကုဒ်ဝှက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြီးသတ်ရန် "လက်ခံသည်" ကိုနှိပ်ပါမည်။
USB ဖြင့် စကားဝှက် (Windows ဖြင့် ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု)- USB Safeguard
ကျွန်ုပ်တို့၏ USB မှတ်ဉာဏ်များ၏ အကြောင်းအရာကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးမည့် လက်တွေ့ကျသော အပလီကေးရှင်းတစ်ခု။ ဖေ့စ်ဘုတ်ဖြင့် အရူးမခံရပါစေနှင့် USB အကာအကွယ်ခေတ်မမီသလိုပဲ၊ ပရိုဂရမ်က အရမ်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းကို Windows အတွက်သာရရှိနိုင်သည်။
အခမဲ့ပရိုဂရမ်၏ အခမဲ့ဗားရှင်းသည် အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်4GB ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်မှာ ပိုကြီးသောမှတ်ဉာဏ်ယူနစ်များကို စကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် "Premium" ဗားရှင်းကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပရိုဂရမ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက၊ pendrive သည် ဗလာဖြစ်နေကြောင်း စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤအဆင့်တွင် ၎င်းတွင်ပါရှိသော အချက်အလက်အားလုံးကို ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ အသေချာဆုံးကတော့ မစတင်ခင် Backup တစ်ခုလုပ်ထားဖို့ပါပဲ။
ပြီးနောက်, ကုဒ်ဝှက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။: သင်ကာကွယ်လိုသောဖိုင်ပေါ်တွင်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံပါပဲ။ စကားဝှက်ကို နှစ်ကြိမ်ထည့်ရမည့် ဘောက်စ်တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မည် (ဒုတိယအချက်မှာ ၎င်းကို အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်)။ လော့ခ်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်- သင်သည် ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သည့် စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်ရန်သာ လိုအပ်သည်။
download link: USB အကာအကွယ်
VeraCrypt ကို အသုံးပြု၍ USB စကားဝှက်ကို ကာကွယ်ပါ။
VeraCrypt သညျ ၎င်းသည် ဖိုင်များ၊ ဖိုဒါများ၊ ဖယ်ရှားနိုင်သော USB ဒရိုက်များနှင့် ဟာ့ဒ်ဒရိုက်တစ်ခုလုံးကိုပင် ကုဒ်ဝှက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ Rohos Mini Drive ကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် virtual encrypted disk ကိုဖန်တီးနိုင်သော်လည်း၊ partitions သို့မဟုတ် storage devices တစ်ခုလုံးကိုလည်း encrypt လုပ်နိုင်သည်။ အခမဲ့ဗားရှင်းသည် 2GB ဒရိုက်များအထိ ကန့်သတ်ထားသည်။
Veracrypt သည် ယခုအခါ ပျက်သွားသည့် TrueCrypt ပရောဂျက်အပေါ် အခြေခံထားသည့် ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို ပေါင်းစပ်ကာ လုံခြုံရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများစွာကိုလည်း ထည့်သွင်းထားကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
တရားဝင် VeraCrypt ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဗားရှင်းအားလုံးကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။Windows၊ Linux၊ macOS၊ FreeBSD နှင့် အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုပင် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၊ အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်မှု wizard ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းသည်အခြားမည်သည့်ပရိုဂရမ်ကဲ့သို့ထည့်သွင်းသည်။ USB ကို စာဝှက်ရန်၊ ၎င်းကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ “အိတ်ဆောင်” ရွေးချယ်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားသည့် ကွန်ပျူတာအားလုံးတွင် VeraCrypt ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုဘဲ ကာကွယ်ထားသောအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုနည်း အလွန်လွယ်ကူသည်- ကျွန်ုပ်တို့ ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးချယ်စရာ «အသံအတိုးအကျယ်ကို ဖန်တီးပါ»၊ ထို့နောက် ရွေးချယ်စရာ «စာဝှက်စနစ်/ဆင့်ပွားဒရိုက်ဗ်» ကို ရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းကိုပြီးသည်နှင့်၊ ကုဒ်ဝှက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းဆိုနေသည့် ပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးတစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မည်။
download link: VeraCrypt သညျ
Linux အတွက်သာ- Cryptosetup
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Linux တွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည့်အလွန်လက်တွေ့ကျသောကိရိယာကိုဖော်ပြပါမည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အခြားလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ cryptsetup.
၎င်းသည် စံ Linux သိုလှောင်မှုတွင် ရနိုင်သော ကုဒ်ကူးဖော်ပြမှုပမာဏများကို စီစဉ်သတ်မှတ်ရန် အခမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ Linux တွင် USB stick တစ်ခုကို ကာကွယ်ရန်၊ သင်သည် Gnome Disk Utility နှင့် Cryptsetup တို့မှ ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ sudo apt-get. ထို့နောက်၊ ဒက်စ်တော့မှ “Disks” ကို စတင်ပြီး ၎င်းကို ဖော်မတ်ရန် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား စကားဝှက်ဖြင့် စာဝှက်ရန် drive ကို ရှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » USB ကို စကားဝှက်နဲ့ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။